यी हुन अाँप खानुका फाइदा – यो जानकारी नछुटाई पढ्नुहोला « 24 news times
४. रगतको मात्रामा बृद्धि: रगतको मात्रा कम हुने मानिसहरूले पनि आँप खानु उपयुक्त हुन्छ । आँपले शरिरमा रगतको मात्रा बढाउँछ । विशेषगरी गर्भवती महिलाहरूलाइ आँफले फाइदा
गर्छ । गर्भवती महिलामा हुन सक्ने रगतको कमीलई पनि यसले कम गर्छ ।
५. सेक्स हर्मोन बढाउन: आँपमा रहेको भिटामिन ई कारण सेक्स हर्मोनमा बृद्धि गराउँछ । यसले यौन जीवनलाई थप खुसी राख्न मद्धत गर्छ । ६. मोटोपन बढाउन: आँपले मोटोपन घटाउने तथा बढाउने दुवै काम गर्न सक्छ तर यसका लागी यसको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी आँपलाई दुधसँग खाने गरेका मोटोपन बढाउन मद्धत गर्छ ।
७. स्मरण क्षमतामा बृद्धी गर्न: आँपमा पाइने ग्लूटामिन नामक एसिडले मानिसको स्मरण शक्ति बढाउन मद्दत गर्छ । उकत एसिडले ब्लड सेललाई सक्रिय बनाइराख्छ ।
अहिले धेरैजसो बालबालिका चस्मा पहिरिएका देखिन्छन् । आँखा चिम्लेर मनन गर्नुहोस् त, हिजोको पुस्ताले यतिविध्न
किड्नी, पित्त थैलीमा भएको स्टोन निकाल्ने अचुक प्राकृतिक उपचार किड्नी अथवा पित्त थैलीमा हुने स्टोन
काठमाडाैँ। थाइराइड भनेको एउटा ग्रन्थी हो । यो घाँटीको अघिल्लो भागमा रुद्रघण्टीको तल रहेको हुन्छ